Yuusuf Sh. Cali Samantar | maktabadda | Af-Soomaaliga | Page 2
Tag Archives: Yuusuf Sh. Cali Samantar
Kaneecadu waa cayayaan duula oo ka mid ah kuwa dadka waxyeellada u leh. Sida ay wax ku yeeshaa ama waa qaniinyo keli ah ama waa qaniinyo cudur dhaafta. Kaneecadu waa cayayaan habeenkii guda maalintiina dhuunta, sida barambarada oo kale, taasoo ay kaga duwantahay duqsiga oo maalintii duula habeenkiina dega.
Kaneecadu waa dhowr cayn, laakiinse halkaan waxaan ka xusaynnaa labo keli ah, kuwaasoo ah Kulijiinta iyo Anofelesta. Kulijiintu wax bay qaniintaa ee cudur ma dhaafo, Anofelestuse waxana waa qaniintaa cudurna way dhaftaa. Anofelesta dheddig keli ah baa cudurka dhaafta, taasoo sababtu tahay inay dhiig u baahan tahay si ay ugaxdeeda ku bislayso. Anofeleska labi uma baahna suu ugax uu bislaynayaa ma jirtee.
Kaneecadu, ama Kulijiin ha ahaato ama Anofelese, waxay ku nooshahay meelaha biyaha macaan leh, kuwaasoo ay markay af bannaan yihiin ugaxdeeda ku dejiso. Ugaxdu meeshii aad u kulul waxay ku dillaacdaa 24 saac, iyadoo dhalaysa lullumo, taasoo muddo dhawr iyo toban beri ah ku kobocda oo markaas tartiibtartiib isugu beddesha kaneeco weyn.
Kulijiinta iyo Anofelesta waaweyn waxaa lagu kala gartaa markay meel saaran yihiin sida ay u kala fariistaan iyo qaabka dhabarkoodu yahay. Kulijiinta waxaad mooddaa inay tuur leedahay, waxayna u fariisataa si oogadeeda iyo meesha ay ku fadhidaa u noqdaan labo xarriiqood oo is barbarsanaya. Anofelesta dhabarkeedu waa toosan yahay, markay meel fadhidana waa foorortaa, si gafuurkeedu dabadeeda dhulka ugu dhowaado. Waxay kaloo ku duwan yihiin in Anofelesta badideed baalasha baro madow ku leedahay oo aan Kulijiintu lahayn – Tilmaamahaas dambe waxay tarayaan in labada jaad la kala garto si ay u sahlanaato in layska ilaaliyo Anofelesta oo ah jaadka duumada keena.
Anofelestu sannadkiiba toban goor iyo ka badan bay is dhashaa, markiibana tan dhaddigi waxay dhigtaa 130 ilaa 300 oo ukumood. Sida badan waxay ku nooshahay dooxooyinka, laakiinse mararka qaarkood waxay kor u kici kartaa ilaa 2000 oo mitir. Xagga socodka waxaa dhici karta inay inta ka tagto meeshay joogto ay gaarto meel u jirta 2-3 kiiloomitir.
1 . Maxay tahay kaneecadu?
2. Sidee bay dadka wax u yeeshaa?
3. Maxaa Anofelesta dhaddigi duumada u keentaa kan labina uusan u keenin?
Duqsigu waxa uu ka mid yahay cayayaanka kuwa ugu daran oo dadka cudurka u keena, wuxuuna ku dhalaa oo ku tarmaa daafadaha musqulaha, xeryaha xoolaha iyo meelaha wax qurmay yaalliin oo dhan. Cimrigiisu waa dhawr toddobaad illowse markii kumanyaal dhintaanba kumanyaal baa dhasha, tarantiisuna waxay aad u badataa markii roobku da’o, oo dhulka qoyo. Wixii qoyan iyo qurunka ayuu dusha ka fuulaa oo cunaa, wuxuuna manjaha ku qaataa xaako mid bukaa tufay, malax boog ka timid, saxaro iyo wax la mid ah, markaasuu cuntada, alaabta lagu dhaqmo iyo oogada dadka kula istaagaa oo jeermigiisa halista ah ku reebaa. Sidaas daraaddeed duqsigu wuxuu ka mid yahay “gaadiidka cudurka”.
Jeermiga duqsigu wadaa waa wax aad u yaryar oo il keligeed ah laguma arki karo. Haddii uu qof daaf ama bakoore qaba indhihiisa ku dego oo malaxda uu ka soo qaado qof awal fayoobaa indhihi gaarsiiyo isna wuxuu halis u yahay inuu jirrado.
Cudurrada xiidmaha gala marar badan isagaa sabab u ah oo cunto ama cabbitaan uu duqsigu jeermi ku reebay baa laga qaadaa. Meeliba meeshii ay ka duqsi badan tahay ka cudur badan. Haddaba waxaa looga nabadgeli karaa in layska ilaaliyo oo la laayo iyadoo la raacayo sida soo socota:
1. In daawada sumaysa loogu dhaqmo.
2. Qashinka oo la uruuriyo oo la daboolo, lana gubo.
3. Xaakada iyo candhuufta oo aan dibedda lagu tufin.
4. Bannaannada oon lagu saxaroon.
5. Musqulaha oo la nadiifiyo, sunta cayayaanka dishana lagu shubo.
6. Dhammaan, wasakhda oo layska ilaaliyo.
1. Xaggee baa duqsigu ku tarmaa?
2. Maxaa duqsiga loogu sheegay inuu yahay gaadiid cudur?
3. Maxaa ka mid ah cudurrada duqsigu faafiyo?
Cayayaan waxaa la yiraahdaa xayawaanka kuwiisa yaryar, sida duqsiga, kaneecada, booddada, injirta, barambarada, shinnida, dhurdaha, balambaalista, roobladhacda iwm. Sida magacyada aan soo sheegnay laga garan karo cayayaanka waxaa ka mid ah, kuwo wax dhiba, sida: duqsiga, kaneecada, booddada, injirta iyo barambarada; kuwo wax tara, sida: shinnida iyo dhurdaha, kuwo aan dadka waxna u tarin waxna u dhimin, sida: balambaalista iyo roobladhacda.
Danta casharkaan laga leeyahay waxaa weeye inaan barannaa cayayaanka kuwiisa dadka caafimaadkiisa dhiba, si ay dabadeed u sahlanaato iskajiriddoodu. Kuwaas waxaa ka mid ah duqsiga, kaneecada, booddada, injirta iyo barambarada. Sida uu cayayaanku cudurrada dadka u gaarsiiyaa waa inta qofka buka ama wasakh meel taal ku hakado uu ka soo qaado jeermiga iyo uumanka kale ee cudurka kiciya oo uu markaas qofka fayow jirkiisa ama cunnada uu cunayo iyo cabitaankiisa ku abuuro. Cayayaanka qaarki cudurka wuxuu ku faafiyaa qaniinyo, sida: kaneecada, qaarka kalena inuu wasakhda qaado, sida: duqsiga iyo barambarada. Giddigood kuwaas cudurrada keena, waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin “gaadiid cudur”. Dadku aalaaba waa sahladaa bahalladaas waxyeelladooda, taasoo aan dhici lahayn hadduu ogaan lahaa in dhibka ay dadka caafimaadkiisa u geysanayaan uu aad uga badan yahay kan bahallada waaweyn. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in bahalladaas lala dagaallamo.
1. Sheeg qaybaha cayayaanka xagga waxtarka iyo waxyeellada, adoo qayb walba wax ka magacaabaya?
2. Maxaa lagu tilmaamaa cayayaanka cudurrada keena?
Jeermigu wuxuu ka mid yahay uumanka badan oo cudurrada keena. Jeermigu isaguna markiisa wuxuu u qaybsamaa jaadad fara badan oo ku kala duwan xagga qaabka, xagga dhaqanka iyo xagga halistaba. Xagga qaabka bal haddaan ka eegno waxaan arkaynnaa in jeermiga qaarkii dhuudhuuban yabay, qaarna qarqaroofan yahay qaar kalena uu wareegsan yahay. Xagga halista haddii iyadana laga eego waxaa la ogsoon yahay in jeermiga qaarkii cudur u keeno dadka keligi, qaarna nafleyda kale, qaar saddexaadna dadka iyo nafleyda kaleba. Xagga dhaqanka waxaa jira in jeermiga qaarkii ku noolaan karo dadka jirkiisa keli ah qaarkii kalena ay suurowdo inuu debedda isaga noolaan karo, intuu doono, ilaa uu ka helo qof uu oogadiisa galo.
Waxaa isweydiis leh maxaa jeermigu dadka oogadiisa u galaa oo markaas cudurro ugu kiciyaa. Jawaabtu waxaa weeye in jeermiga laftiisu yahay nafley oo sida nafley kasta oo kale uu u baahan yahay quud, quudkaasoo uusan isagu awood u lahayn inuu samaysto. Taasaa jeermiga ku khasbaysa inuu raadsado nafley kale oo uu ka helo wuxuu u baahan yahay.
Jeermigu si qarsoodi ah buu qofka jirkiisa u soo galaa isagoo kaalmaysanaya yaraantiisa badan oo aan qofka u oggolaan karin inuu inta indhihiisa keligood ku arko markaas iska celiyo. Markii la rabo in jeermiga la arko waxaa lagu isticmaalaa aalad gooni ah oo la yiraahdo Weyneeye (mikraskoob) oo wixii lagu fiiriyo muuqaalkooda aad u weynaysa si markaas araggoodu u sahlanaado.
Jeermiga waxyaalaha qofka u legda waxaa ka mid ah cunno-xumada iyo nadaafad-xumada. Qofkii cunno wanaagsan cuna oo oogadiisu xoog leedahay iyo kii ku dadaala nadaafadda korkiisa, tan dharkiisa iyo tan gurigiisaba, jeermigu kuma soo degdego.
1. Muxuu yahay jeermi?
2. Sidee baa loo arki karaa jeermiga?
3. Maxaa jeermiga kaalmeeya si uu qofka cudur ugu keeno?
Dhulku waa meesha la degganyahay oo lagu raaxaysto. Sidaas aawadeed ayay lagama maarmaan u tahay in nadaafaddiisa la dhawro oo lagu dadaalo inuu mar walba hufnaado.
Dhulka ay guryuhu ku yaalliin, fagaagga ay kala leeyihiin, waddooyinka dhex mara iyo bannaannada xaafadaha kala gooya waxaa la doonayaa in aad loo hufo, qashinkana aan lagu daadin haddii kale waxaa ka dhalanayaa cayayaanka cudurrada keena.
Beeraha nasniinta iyo barxadaha magaalooyinka ku yaal waa in aad nadaafaddooda loo ilaaliyaa oo aan la wasakhayn loona kor tegin, maxaa wacay waa meesha uu dadku ku nasto, oo uu ku tebiyo daalkii uu shaqada kala kulmay, waxna uu ku akhristo, carruurtana loogu raaxeeyo oo lagu maaweeliyo.
Nadaafadda dhulka waxaa ka mid ah in lagu beero dhir qurux u kordhisa, habaaska kacayana celisa, iyadoo isla mar ahaantaas dadku ka helayo hoos iyo neecaw caafimaad leh.
Meelaha laga yaabo in boor ka kaco was. in la rusheeyo si ay ciiddu u degto. Nadaafadda dhulku waxay ka dhigan tahay tan oogada, dharka iyo gogosha, sidaas awgeedna waa in aad loo dhowraa.
1. Wax ka sheeg siyaabaha loo ilaaliyo nadaafadda dhulka?
2. Maxay ka dhigan tahay nadaafadda dhulku?
Gurigu waa meesha uu qofku noloshiisa badankeeda ku dhammaysto, isagana ilaaliyo kulaylka, qabowga, roobka, dabaysha, dugaagga, tuugada iyo wixii naftiisa dhibaya oo dhan. Gurigu inuu hufnaado waa wax lagama maarmaan ah. Waxaa aad u habboon gurigu inuu ku yaal meel ka fog meelaha warshadaha ah oo ay ka mid yihiin meelaha wax lagu magdeeyo ama biraha lagu tumo iyo meel kasta oo shanqar badan ama xoolaha lagu xereeyo.
Neecawda iyo iftiinku waa inay soo geli karaan guriga oo uu lahaado irdo iyo daaqado ku filan, kuwaasoo kordhinaya nadaafaddiisa, waxaana fiican inuu leeyahay meel fagaag ah oo u bannaan oo lagu faalalo.
Hufnaanta guriga bay ka mid tahay in musqushu ku taal meel xoogaa ka dhaqaaqsan qolalka la seexdo ama haddii kale ay ahaato mid aad loo nadiifin karo. Waa inay lahaataa daaqad ay galaan iftiinka iyo neecawdu. Marka guriga la xaaqayo haddii laga yaabo in boor ka kaco waa in marka hore lagu sayro in yar oo biyo ah, daaqadahana loo furo si uusan qofka xaaqayaa ugu dhibtoon. Qashinka waa in lagu uruuriyo weel dabool adag leh si uusan uga soo bixin cayayaanka waxyeellada lihi, marka uu batana waa in loo qaado qashinqubka. Mar walba waa in guriga laga laayo cayayaanka halista ah oo ay ka mid yihiin duqsiga, barambarada iyo kaneecada, kuwaasoo haddii aan laga hor tegin tarmaya oo guriga ku badanaya. Alaabta guriga taal waa in lagu dadaalo nadaafaddeeda oo laga ilaaliyo wasakhda.
Gogosha lagu seexdo iyo dharka la huwado waa in la jafjafaa oo la qorraxeeyaa. Nadaafadda guriga waxaa kale oo ka mid ah inaan lagu daadin qudaarta diirkeeda iyo inaan lagu tufin calyada, iyo xaakada. Waxyaalahaas oo dhan vaxaa ka dhasha jeermi halis ah, bilicda gurigana waa dilaan.
Ka sheekee, adoo aan casharka dib ugu noqon, sida guriga nadaafaddiisa loo ilaalin karo?
Biyahu waxay ka mid yihiin waxyaalaha qofka noloshiisa lagama maarmaanka u ah. Qofka waxaa ku kallifa inuu biyo cabbo waa harraadka oo ka imanaya jirka oo biyuhu ku yaraadeen. Taas micneheedu waxaa weeye in harraadka runta ahi uusan ahayn afka iyo dhuunta qallalaya markii qofku biyo ka raago ee uu yahay jirka oo aan helin intii biyo ahayd oo uu u baahnaa. Taas waxaa daliil u ah in qofka harraadku ka ba’ayo haddii xididka biyo looga shubo isagoo aan biyo cabbin. Afka iyo dhuunta qallalayaa, markii qofku harraado, shaqadoodu waa digniin sheegaysa in jirka biyihii ku yaraadeen. Haddii aan taasi dhici lahayn jirku waa qallali lahaa isagoo aan laga war helin.
Qiyaasta biyaha ah oo la sheego inay habboon tahay in qofku maalintii iyo habeenkii cabbo waa hal litir iyo bar. Waxaa dhici kara in qofku uusan intaasoo biyo ah wada cabbin ee uu qaarkood u qaato cabbitaanno kale, sida: caano, shaah, aranjaato, liimo, iwm. Qiyaasta biyaha ah oo maalintii la cabbayo waxyaalo badan baa saamayn kara, sida: xilliga, dhididka iyo shaqada qofka. Mar haddii xilligu kululyahay ama qofku aad u shaqeeyo, aadna u dhidido, biyo cabkiisu waa kordhayaa, sida haddii xilligu qabowyahay ama qofku uusan shaqo culus qabannin, uusan dhididinna, biyocabkiisu uu yaraanayo.
Biyaha la cabbaa waxay ahaan karaan kuwo roob, kuwo ceel, kuwo webi, kuwo gal iyo kuwo badeed oo cusbadii laga miiray. Biyaha roobka oo iyagoo aan dhulka soo gaarin weel loo dhigaa ma habboona maxaa yeelay waxaa ka maqan cusbood jirku u baahanyahay. Sidaasoo kale kuwa baddu haddii aan la miirin ma habboona maxaa yeelay waxaa ku badan cusboodka. Biyaha la cabbayaa waa inayan ur, dhadhan iyo midab toonna lahayn, ay jeermiga cudurrada keenana ka bannaan yihiin.Taas waxaa lagu gaari karaa in biyuhu dhuumo ku socdaan meeshay ka imanayaanna ayan uga sokayn musqul iyo buq wasakheed oo kale masaafo 20 mitir ka hoosaysa. Mar haddii uu jiro shaki dheehmid, biyaha waa in la karkariyaa intaan la cabbin ama lagu daraa jeermitirayaasha uu ka mid yahay Isteridoroolku.
1. Harraadka runta ahi muxuu ka yimaadaa?
2. Maxaa saamayn kara qofka biyocabkiisa?
3. Maxaan la doonayn in biyaha la cabbayaa leeyihiin?
4. Maxaa la rabaa inay ka fogyihiin meelaha biyaha la cabbayo laga keenayo?
Qofku si uu ku noolaado cunno ayuu u baahan yahay, hase ahaate cunnada uu cunayaa waa inay ahaataa mid habboon xagga nooca iyo xagga tiradaba, isla mar ahaantaasna nadiif ah. Tan ku saabsan haboonaanta cunnada meel kale oo buuggaan ka mid ah ayaa looga faallooday. Casharkaan danta laga leeyahay waa in wax tilmaan ah laga siiyo akhristayaasha sida loo ilaaliyo nadaafadda cunnada. Guud ahaan waa in cunnada laga ilaaliyo cayayaanka, xabaasha iyo ciidda. Cunnadu xagga diyaarinta waxay u qaybsantaa wax la bisleeyo, wax iyagoo aan la bislayn la cuno iyo wax labada siiyoodba lagu cuni karo. Kuwa hore waxaa ka mid ah hilibka, badarka, bariidka, baastada, iwm. Kuwaasi mar haddii ayan meel xun soo marin waxaa ina ka walwal tiri kara nadaafaddooda in si fiican loo bisleeyo, taasoo dilaysa wax alla wixii uuman cudur ahaa oo ku jirey. Laakiin waxa iyana fiiro u baahan in weelka wax lagu karinayaa uusan ka samaysnayn macdannada lisma markay kululaadaan oo intay cunnada ku dhiimaan markaas dadka sumeeya.
Waxa aan kariska u baahnayn waxaa ka mid ah qudaarta iyo cagaarka. Kuwaas waxaa lagu nadiifin karaa in si fiican loo mayro. Haddii shaki jiro in kuwaas jeermi ku dheehan yahay waxaa la yeeli karaa in lagu mayro jeermitireyaal, sida: Dettoolka iyo Isteridoraalka. Markaas kaddibna waxaa lagu miiraa liin dhanaan. Cunnada bisayl iyo bisayl la’aanta lagu cuni karo waxaa ka mid ah caanaha, ukunta, saliidda iwm. Kuwaas waxaa habboon in la karkariyo, siiba markii laga baqayo inay dheehan yihiin.
Fiiro gaar ah waxaa u baahan cunnada dhigaalka ah, sida: hilibka, caanaha iyo subagga gasaca lagu kaydiyo, maxaa yeelay waxay halis u yihiin in jeermi ku dhex beermo. Sidaas daraaddeed waa in marka loo diyaarinayo dhigidda la tarantiro (jeermiga laga idleeyo).
1. Cunnadu xagga diyaarinta meeqa qaybood bay u qaybsantaa?
2. Guud ahaan maxaa la doonayaa in cunnada laga ilaaliyo?
3. Cunnada dhigaalka ah maxaa loo baahanyahay in lagu sameeyo?
Hawlaheenna waxaannu ku qabsannaa gacmaheenna, intaannu hawlahaas wadnana waxaa gacmaheenna ku dhegdhega wasakh badan. Wasakhdaasi waa halis haddii aynaan iska mayrin markii aannu shaqooyinkeenna dhammaysanno.
Waa in qofku ka caado yeeshaa inuu gacmihiisa biyo iyo saabbuun ku dhaqo mar walba oo ay u suurowdo, siiba mararkaan soo socda:
1. Marka uu qofku musqusha ka soo baxo;
2. Marka uu qofku rabo inuu cunnada cuno;
3. iyo marka uu cunnadaas idlaysto.
Si aannu nadaafadda gacmaha u dhammaystirro waxaa loo baahan yahay inaannu ciddiyaha iska jarro si aysan wasakhi gudahooda ugu dhuuman. Ciddiyaha jariddoodu waa lagama maarmaan si nadaafadda jirka guud ahaan loo ilaaliyo, gaar ahaanna nadaafadda gacmaha. Waxaa jira cudurro badan oo laga qaado gacmaha wasakhaysan, siiba ciddiyaha hoostooda wasakhda ku jirta. Cudurradaas waxaa ka mid ah Ameebaha oo lagu magacaabo ”cudurka gacmaha wasakhda ah”.
1. Goormay aad u habboon tahay in gacmaha layska mayro?
2. Maxaa dhici kara haddii gacmo aan la mayrin wax lagu cuno?
Wajigu waxa uu ka koobmaa : foolka, indhaha, sanka, afka, dhegaha iyo xubno kale. Xubnaha aan kor ku soo sheegnay waa kuwo hawl weyn oogada u haya, sida: indhaha oo kale oo ka mid ah lixda lixaad.
Wajigu wuxuu u baahan yahay in aad loo ilaaliyo nadaafaddiisa, taasoo ku suurtoobi karta isagoo lagu mayro biyo iyo saabbuun dhowr goor maalintiiba dhididka iyo habaaskana laga tirtiro.
Haddii aan nadaafadda wajiga lagu dadaalin waxaa dhacaysa in duqsigu isagoo jeermi xambaarsan uu ku dego oo markaas cudurro halis ihi halkaas ka dhashaan. Cudurrada sidaas ku iman kara waxaa ka mid ah daafka iyo bakooraha, indhabbeelka keena.
Ilaalinta nadaafadda wajiga ayay ka mid tahay inaan faro iyo masar wasakh ah toonna wajiga la marin, sida dadka qaarki yeelo, maxaa yeelay dhaqanka noocaas ihi wuxuu sabab u noqon karaa dhibaatooyinkii aan horay u soo sheegnay. Waxaa iyana xusid mudan in wajiga waxtarkiisu uusan ku ekayn inay isaga ku yaalliin xubnihii aan soo sheegnay ee uu haddana yahay muraayaddii qofka, taasoo mar labaad ka dhigeysa nadaafaddiisa lagama maarmaan.